Somaaliland oo walaac kamuujisay saldhiga turkiga kafurtay magaalada muqdisho – Balcad.com Teyteyleey
Maamulka Somaliland ayaa markii u horeysay ka hadlay saldhigga Milateri ee dowladda Turkiga ka dhisatay magaalada Muqdisho, kaasoo sabtidii la soo dhaafay si rasmi ah xarigga looga jaray, saldhiggan ayaa lagu tababarayaa Ciidamada Soomaaliya.
Wasiirka Gaashaandhigga Somaliland Axmed Xaaji Cali Cadami oo la hadlayay warbaahinta gudaha ee Somaliland ayaa sheegay in shaki weyn ka qabaan saldhigaas iyo qaabka uu u howl geli doono.
“Cid walba waa u muhiim in ay taageerto meesha ay wax ka heleyso, anaga kama soo horeedno in Soomaaliya ay heshiisyo la gasho dalalka caalamka, si loo gacan siiyo, waxaa is weydiin leh Saldhigga Milateri ee Turkiga ka furay Muqdisho ma Soomaaliya nabadgelyadeeda looga shaqeynayaa mis waa mid Somaliland hub iyo ciidan loogu aruursanayo Somaliland”ayuu yiri Wasiir Cadami.
Somaliland oo ku dhawaaqday sanadkii 1991 inay ka go’day Soomaaliya inteeda kale ayaa wali helin wax aqoonsi ah, hase ahaatee deegaanadeeda ayaa lagu ammaanay inay ka jirto nabadgelyo iyo xasilooni siyaasadeed.
Jaamacadda Banaadir oo xaflad soo dhoweyn ah u sameysay Arday ku soo biirtay
October 03 (Jowhar)— Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu booqasho rasmi ah uu ku tago magaalada Khartoum ee dalka Sudan, taasoo qeyb…
October 03 (Jowhar)— Xaflad lagu soo dhoweynayey dufcadii ugu horeysay ee isku diiwaan gelisay Taqasuska Maareynta Masiibooyinka (Master in Disaster Resilience Leadership…
Dowladda Soomaaliya oo Sacuudiga uga mahad celisay 50 Milyan oo dollar ay ugu deeqday
October 02 (Jowhar)— Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa Boqortooyada Sacuudiga uga mahadceliyey taageerada joogtada ah ee dib u dhiska dalka,…
WFP oo dhimaysa cuntada ay siiso qaxootiga ku nool dalka Kenya
October 02 (Jowhar)— Hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP ayaa ku dhowaaqday inay dhimayso boqokiiba soddon cuntadii ay siin jirtey qaxooti ka badan afar…
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya
October 02 (Jowhar)—TRa’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta kulan la qaatay wakiilka Xoghaya guud ee Qaramada Midoobay…
The post Somaaliland oo walaac kamuujisay saldhiga turkiga kafurtay magaalada muqdisho appeared first on Ilwareed Online.